Bayaan ka soo baxay Nidaamka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ee ku saabsan taageerada uu siinayo xakameynta caabuqa COVID-19 | UNSOM
08:42 - 05 Jun
“Bahda QM ee Soomaaliya waxay garab taagantahay dadka Soomaaliyeed waqtiga mixnada ah. Waxaan sii wadi doonnaa inaan taageerno dhammaan dadaallada aan wax looga qabanayo caafimaadka degdegga ah iyo saameynta dhaqan-dhaqaale ee muddada-dheer ee COVID-19,” ayuu yiri James Swan, Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. “Waa inaan dhammaanteen u midownaa si aan uga hortagno faafitaanka fayruuska. Waxaan u baahanahay inaan fiiro gaar ah siinno kuwa aadka ugu nugul bulshadeena, oo ay ka mid yihiin dadka gudaha ku barakacay, kuwa naafada ah iyo waayeelka.”
Qaramada Midoobey waxay ugu baaqeysaa qof walba oo Soomaaliya jooga inay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah cudurkan safmareenka ah.
“Waxaan ku celinaynaa baaqa Xoghayaha Guud ee ah xabbad joojin calami oo deg deg ah oo dhinac la iska dhigo colaadaha, aamin darrada, iska horimaadyada iyo cadaawada, oo diiradda la saaro la dagaalanka fayruuska, oo aan midba midka kale ku mashquulin”, ayuu yiri Md. Swan. “Tani waxay lagama maarmaan u tahay in kaalmada badbaadinta nolosha ay gaarto bulshooyinka ku nool dalka oo dhan. Halkan, Soomaaliya, Qaramada Midoobay waxay ku baaqeysaa in la joojiyo falalka rabshadaha iyo argaggixisada si dhammaan hantida iyo taakuleynta loogu soo hago la-dagaallanka masiibada safmareenka COVID-19.”
Si loo xoojiyo dadaallada socda ee lagu xakameynayo COVID-19 ee heerarka federaalka iyo gobolka iyo sidoo kale la yareeyo suurtagalnimada faafitaanka fayraska, Qaramada Midoobay waxay sameysay nidaam si ballaaran looga wada shaqeynayo, caafimaad iyo nidaamyo taageero. Guddi hawleed ayaa loo sameeyay inay hubiyaan sii wadida ganacsiga halka Hay'aduhu diyaariyeen qorshe diyaar-garow iyo jawaabcelin faahfaahsan oo lagu taageerayo dadaallada Dowladda.
Kuxigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud, ahna Isuduwaha Hawlaha Samafalka Soomaaliya, Adam Abdelmoula, wuxuu yiri "taageeradayada adag ee aan siineyno Soomaaliya waa sii socota." “Hay'adaha oo dhami waa ay wada shaqeynayan waxayna sii wadaan gargaarkooda culus ee ku gaarsiinayaan kuwa ugu baahida badan.”
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), oo ah hay'adda gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka, ayaa sii wada taageerada ay siiso waaxda caafimaadka Soomaaliya iyada oo kor u qaadeysa u diyaargarowga wax ka qabashada iyo ka jawaab celinta COVID-19. Caawinta WHO waxay muhiim u tahay in si dhakhso leh loo dhiso hanaan lagu tijaabiyo laguna xaqiijiyo kiisaska la tuhunsan yahay, iyo in la karantiilo kiisaska laga shakisan yahay si looga hortago gudbinta hor leh.
"WHO ayaa si xoogan ula shaqeynaysa Madaxada caafimaadka Soomaaliya sida helista kiisaska, raadinta xariirada ay sameeyeen, baaritaankooda, go'doomin iyo hawlaha xayirida isagoo qasdigiisu yahay xakamaynta virus iyo daahiyaan kaca ah bukaanka," ayuu yiri Dr. Mamunur Rahman Malik, Wakiilka dalka WHO ee Soomaaliya. iyada oo ujeedadu tahay xakamaynta fayraska iyo dib u dhigista bukaanka surge,” ayaa uu yiri Dr. Mamunur Rahman Malik, Wakiilka Waddanka ee WHO ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, Xafiiska Qaramada Midoobay ee Taageerida Soomaaliya (UNSOS) wuxuu sii wadaa fulintiisa waajibaadka ah inuu ku taageero saadka ah Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyo sidoo kale xubno ka tirsan ciidamada amniga Soomaaliya oo ku hawlan howlgalada amniga ee wadajirka ah ee AMISOM. Isuduwaha Hawlaha jawaab-celinta ee QM COVID-19, Agaasimaha UNSOS Amadu Kamara, wuxuu ku biirayaa guddi howleedka qaran ee ka jawaabidda COVID-19 ee Soomaaliya. Xaaladda guud, UNSOS iyo AMISOM waxay awoodeen inay ka caawiyaan dowladda Soomaaliya inay ka jawaab celiso kiiskii ugu horreeyay ee looga shakiyay ee COVID-19.
Hay'adaha kale iyo barnaamijyada QM waxay taageerayaan hirgelinta qorshaha jawaab-celinta ee COVID-19 iyadoo la siinayo khibrad farsamo iyo saadka farsamada Dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka. Qaar ka mid ah kuwan waa tababarayaal shaqaalaha caafimaadka, oo bixiya qalab loogu talagalay xarumaha go'doominta, oo ay ku jiraan xirmooyinka baaritaanka, qalabka ilaalinta shaqsiyeed,ballaarinta awoodaha hore ee ogaanshaha iyo sare u qaadista jawaabaha nadaafadda. Si wax looga qabto mid ka mid ah baahiyaha ugu muhiimsan, Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay wuxuu qorsheynayaa inuu u qaybiyo laba bilood qiimihii cuntada ee ay siin lahaayeen iyagoo eegaya xaaladda sii xumaanaysa.
“Dunida waxaa soo food saartay musiibo aan hore loo arag oo u baahan jawaab celin iyo go'aan qaadasho deg deg ah. Annaga oo ah Bahda QM waxaan sii wadi doonnaa wada shaqeynta aan la leennahay Dowladda si aan u xaqiijino in dadka Soomaaliyeed loo ilaaliyo, iyadoo aan sii wadi doono howlaheena badbaadinta joogtada ah ee wax looga qabanayo baahiyaha dadka Soomaaliyeed ee aadka u nugul,”ayuu raaciyay Mudane Abdelmoula.
 Ergeyga Qaramada Midoobay oo Maalinta Caalamiga ah ee Miinada iftiimiyay baahida loo qabo iskaashi si loo ciribtiro khatarta
 QM ee Soomaaliya oo xaqiijisay in qof shaqaale ah oo ka tirsan shirkad ganacsi oo qandaraasle ah laga helay caabuqa cudurka COVID-19